Man United & Arsenal Oo Kulan Cajiib Ahaa Barbaro Ku Galay Old Trafford, Liverpool Oo Guul Soo Laabasho Layaableh Ah Ka Soo Gaadhay Burnley Iyo Wolves Oo Ka Yaabsatay Chelea – Page 3 – Cadalool.com
KULANKA MAN UNITED VS ARSENAL
Kooxaha Manchester United iyo Arsenal ayaa barbaro 2-2 ah ku galay Old Trafford kadib markii ay Jesse Lingard iyo Martial meesha ka saareen laba gool oo ay kala dhaliyeen Mustafi iyo Lacazette laakiin cida kulankan ka faa’iiday ayaa ah kooxaha Tottenham iyo Chelsea.
Kaydka: Petr Cech, Mohamed Elneny, Henrikh Mkhitaryan, Stephan Lichtsteiner, Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah, Ainsley Maitland-Niles.
Kaydka: Sergio Romero, Romelu Lukaku, Maroaune Fellaini, Paul Pogba, Antonio Valencia, Juan Mata, Scott McTominay.
Alla maxay ciyaar ahayd! Kooxaha Man United iyo Arsenal ayaa soo bandhigay ciyaar furan oo qurux badan isla markaana ay jamaahiirta caalamku si wayn ugu raaxaysteen. Manchester United iyo Arsenal ayaa ahaa kuwo aan wax cabsi ah muujin waxayna u ciyaareen si furan oo weerar iyo weerar celis ah taas oo kulankan ka dhigtay mid aan laga jeedsan karin.
Daqiiqadii 26 aad Manchester United oo Old Trafford joogta ayaa goolka furitaanka looga yaabsaday kadib markii uu Mustafi si buuxda uga faa’iideeyay kubbad caawin uu ka helay Torreira wuxuuna De Gea sameeyay qalad xun isaga oo Gunners u ogolaaday in ay hogaanka ciyaarta 1-0 ku qabto.
Daqiiqadii 30 aad farxadii Arsenal iyo murugadii Man United ayaan soo waarin waxayna United awooday in ay ciyaarta si deg deg ah ugu soo laabto waxaana goolka barbaraha ee muhiimka ahaa u saxiixay Anthony Martial kaas oo markiisa caawin ka helay Ander Herrera waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1.
Daqiiqadii 36 aad Arsenal ayay dhibaato wayn oo dhaawac soo gaadhay kadib markii garoonka laga dhex qaaday Rob Holding waxaana ciyaarta la soo galayay Lichtsteiner laakiin xamaasada ciyaarta ayaa cirka isku shareertay isaga oo garsrooruhu uu kaadhadh digniin ah oo xidhiidh ah bixiyay.
Wax walba oo ay Man United iyo Arsenal ka sameeyeen Old Trafford ee qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah laakiin markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta waxay wax walba noqdeen wax aan qoraal lagu qeexi karin xamaasadii ciyaartu ay yeelatay.
Daqiiqadii 68 aad Alla Maxay waali ahayd! Arsenal ayaa keensatay goolkeeda labaad kadib markii uu Marcos Rojo musiibo wayn ku noqday kooxdiisa Man United isaga oo markii hore qalad soo galay balse markale Lacazette u ogolaaday in uu dhaliyo goolka labaad ee Arsenal waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Arsenal hogaanka markii labaad ku qabtay.
Daqiiqadii 69 aad Alla Maxay Jawaab Cad Ahayd!! Haddii waalidii Rojo la sii hadal hayay waxay markiiba Man United heshay goolkeeda labaad ee barbaraha iyada oo isla kubbadii laysku soo baastay ay markiiba soo gaadhay xerada ganaaxa Arsenal laakiin kubbada uu Lukaku mashquuliyay difaaca Arsenal ayuu Lingard ka dhex qaatay wuxuuna ku dhaliyay goolka labaad ee United!!!!!!.
Xaalada ayaa noqotay mid waali ah oo aan la qeexi karin, min cadhadii Mouriho, farxadii dhiciska ahayd ee Emery iyo jawaabihii labada kooxood ayaa ahaa wax aan la rumaysan karin. Ciyaarta ayaa intaa kadib noqotay mid weerar iyo weerar celis ah.
Daqiiqadii 71 aad Aubameyang ayaa ugu dhawaaday in uu Arsenal markii saddexaad hogaanka u dhiibo laakiin David De Gea ayaa ugu danbayn saamayntiisa la soo baxay si uu Gunners uga beeniyo goolkan.
Qalaad badan iyo weerar badan oo ay labada kooxoodba sameeyeen ayaan keenin wax goolal kale ah waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay barbaro 2-2 ah waana natiijada ugu cadaalad samayd ee ay labada kooxoodba u qalmeen.